Fiber Optical Accessories Vagadziri & Vatengesi | China Fiber Optical Chishongedzo Fekitori
Fiber optic pigtails inopa inokurumidza nzira yekugadzira ekutaurirana zvigadzirwa mumunda. Iwo akagadzirwa, akagadzirwa uye akaedzwa zvinoenderana neprotocol uye mashandiro akarairwa nemaindasitiri zviyero, izvo zvinosangana neako akaomarara zvakanyanya meanho uye mashandiro ekuita. Feature 1. Chigadzirwa chinogamuchira kunze kwenyika zvedongo pini uye inopinza yepamusoro mhando fiber optic tambo. 2.Svitsai ekunze epamberi kukuya tekinoroji uye kukuya michina kuverengera kuri kutsauka kweiyo fibe ...
Fiber optic pigtails inopa inokurumidza nzira yekugadzira ekutaurirana zvigadzirwa mumunda. Iwo akagadzirwa, akagadzirwa uye akaedzwa zvinoenderana neprotocol uye mashandiro akarairwa nemaindasitiri zviyero, izvo zvinosangana neako akaomarara zvakanyanya meanho uye mashandiro ekuita. Rondedzero Dhijitori A LC Chinobatanidza B Isina Kuisirwa Fibre Mode 9 / 125μm Fibha Type Simplex Polish APC Cable Dhayamita 0.9mm Jekete Chinyorwa PVC Jekete Ruvara Wera Wavelength 1310nm / 1550nm Kugadzikana. ...
Fiber optic pigtails inopa inokurumidza nzira yekugadzira ekutaurirana zvigadzirwa mumunda. Iwo akagadzirwa, akagadzirwa uye akaedzwa zvinoenderana neprotocol uye mashandiro akarairwa nemaindasitiri zviyero, izvo zvinosangana neako akaomarara zvakanyanya meanho uye mashandiro ekuita. Rondedzero Yekubatanidza Rudzi FC Polish Type UPC / APC Fibre Mode OS2 9 / 125μm Wavelength 1310 / 1550nm Fiber Count Simplex Fibre Giredhi G.652.D / G.657.A1 Kuisa Loss ...
ST Single Mode Patch Netambo
Iyi ST Single Mode Patch Cord ndeimwe ye MT dzakateedzana zvinongedzo. Iwo ma ferrules eakateedzana anoshandisa maviri maburi anotungamira ane dhayamita pane ferrule yekupedzisira kumeso uye pini yekunongedzera yeiyo chaiyo kubatana. Uye zvakare, inogona kugadziriswa kuburitsa dzakasiyana siyana dzekusvetuka. Iyo compact dhizaini yekubatanidza inobvumira iyo jumper kuve nenhamba hombe yemakores uye diki saizi. Kune rimwe divi, iyi ST Imwe Mode Patch Tambo inogona kushandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakakora-dzakasangana fiber-optic mutsetse mamiriro ...
Yakasarudzika Mode Kune Multimode Fiber Patch Tambo
Iyi imwechete mode kune multimode fiber chigamba tambo yakanyatsogadzirirwa kugadzira tambo tambo kubva kuchinhu kuenda kune iyo fiber optic kabling chinongedzo. Iyi yakasvibirira yekudzivirira dara inowanzo shandiswa yekubatana pakati peiyo transceiver optical uye terminal bhokisi. Inofananidzwa netambo yakajairwa pamusika, yedu imwechete mode kune multimode fiber chigamba tambo yakagadzirirwa mukana wekudzokorora kwakanaka, kwakanaka kwepakati-plug kuita uye kwakanaka tembiricha kugadzikana. Kune rimwe divi, zvakare reali ...
SC kuna SC Single Mode Patch Netambo
Iyi SC kune SC imwechete mode chigamba tambo ine maburi maviri ekutungamira ane dhayamita pane ferrule yekupedzisira kumeso uye pini yekunongedzera yeiyo chaiyo kubatana. Zviri nyore chaizvo kumisikidza uye hapana kudikanwa kwekuchengetedza. Uye zvakare, inogona kugadziriswa kuburitsa akasiyana mafomati eMMP anosvetuka. Yakashongedzerwa neepamberi maitiro, yedu SC kune SC imwechete mode chigamba tambo inogona kushandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakakora-dzakasanganiswa fiber-optic tambo nharaunda mune wiring maitiro, kuverengera kumhanya kushanda. O ...
SC kuna LC Single Mode Patch Netambo
Iyi SC kune LC imwechete mode chigamba tambo yakabatana neiyo optical hutachiona system, iyo inoona basa rekutaurirana kuburikidza neanosangana coupling, uye hapana chinhu mune yekodhi fomati yechiratidzo. Zvichienzaniswa netambo yakajairika pamusika, yedu SC kuLC imwechete mode tambo tambo ine zvakanakira kupa Ultra-yakaderera latency dhata yekufambisa uye kutsigira iyo yekupedzisira-yakafara magetsi magetsi magetsi. Yakashongedzerwa neyakanaka simba dziviriro uye otomatiki switching, inotsigira yekupedzisira ...
MTRJ kuti MTRJ Fiber Optic chigamba Netambo
Iyi MTRJ kune MTRJ Patch Cord yakagadzirirwa zvigadzirwa zvekudzivirira, izvo zvinoziva basa rekudzivirira kukanganisa kwenzvimbo dzakatenderedza kune iyo fiber fiber, senge mvura, moto, kuvhunduka kwemagetsi, nezvimwewo. Pakati ndiyo girazi rinoendesa mwenje. Mune multimode fiber, musimboti une dhayamita, iyo ingangoenzana nehupamhi hwebvudzi remunhu. Iyo imwechete-modhi fiber musimboti ine dhayamita. Kunze kwemukati kwakakomberedzwa nehamvuropu yegirazi ine indekisi yakaderera ye ...
LC kune LC Imwe Mode Fibre Patch Tambo
Iyi LC kune LC imwechete mode fiber chigamba tambo inogona kunge iri nzvimbo yakanaka yekubatana kweiyo fiber fiber yekuparadzira furemu uye yemaziso ruzivo socket kune switch, iko kubatana pakati pemaswichi, kubatana pakati pekuchinja uye komputa, uye kubatana iyo optical ruzivo socket uye komputa. Yakashongedzerwa nekuita kwepamusoro, yedu LC kune LC imwechete mode fiber chigamba tambo inogona kuiswa kune manejimendi sisitimu. Nekuda kwehukuru hwakafanira uye huremu hwakareruka, ...
LC Imwe Mode Fibre Optic Patch Tambo
Iyi LC Imwe Mode Patch Pambo Cord inonyanya kukodzera kumatunhu akakomberedzwa echikwata. Inofananidzwa netambo yakajairika pamusika, tambo iyi yakagadzirirwa ine-diki-yekubatanidza, iyo inochengetedza yakawanda nzvimbo ichienzaniswa neyakajairika tambo jumper isina kukanganisa kudhonza. Uye iyo diki yekubatanidza muswe sheath ipfupi pane yakajairwa LC yekubatanidza muswe sheath, iyo inochengetedza yakawanda nzvimbo yekutarisira kabhodhi. Nekuda kwekuita kwakanyanya, yedu LC Imwe Mode Patch Cord ine ipfupi ...
FC Single Mode Patch Tambo
Inosangana neEIA / TIA 604-2 ine zvedongo ferrule yeiyo inomhanya makabati network. · Cable yakadhindwa inobatsira kujekesa uye kuziva tambo dzakasiyana. · Zirconia Ceramic Ferrule Optimum IL uye RL. · Bend isinganzwisisike fiber tambo inoratidza kuita kukuru pakusimba. · K = K katoni package inopa max kudzivirirwa pazvinhu zvako. Tsanangudzo Connector FC kune FC Jacket OD 1.6 / 1.8 / 2.0 / 3.0mm Fibre Mode 9 / 125μm Jacket Ruvara rwePendi Polishing APC kuAPC Jacket Material PVC (OFNR), OFN ...
ST ku ST OM3 Duplex Patch Cord
Inosangana neEIA / TIA 604-2 ine zvedongo ferrule yeiyo inomhanya makabati network. · Cable yakadhindwa inobatsira kujekesa uye kuziva tambo dzakasiyana. · Zirconia Ceramic Ferrule Optimum IL uye RL. · Bend isinganzwisisike fiber tambo inoratidza kuita kukuru pakusimba. · K = K katoni package inopa max kudzivirirwa pazvinhu zvako. Tsanangudzo Connector ST kuenda ST Jacket OD 1.2 / 1.6 / 2.0 / 3.0mm Fibre Mode 50 / 125μm OM3 Jaketi Ruvara Aqua Kupukuta UPC kune UPC Jacket Material PVC (OFNR), OFNP, LSZH Kuisa ...